Simoron ho an'ny fitiavana
Tsy ny olon-drehetra no afaka mihaona tsotra fotsiny ny olona iray izay hanome aingam-panahy anao amin'ny fiainana isan-karazany, izay milaza amin'ny tsikitsiky iray fa tsy ny rehetra no very, fa ny olana iainana rehetra dia azo resena.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, tsy azo atao ny mihaona amin'olona toy izany satria ny olona tsirairay mba hanomboka dingana vaovao eo amin'ny fiainany dia mila mamela ny fifandraisana taloha izay tsy nanamarina ny fanantenany. Ao anatin'izany toe-javatra izany no iavian'i Simoron amin'ny fitiavana.
Rehefa te hihaona amin'ny olon-tianao ianao dia aza mifantoka amin'ny olona iray manokana. Na izany aza dia hafahafa ihany izany, ny fitiavana dia tsy ampoizina fotsiny. Eto amin'ny antsipiriany, miezaha hamantatra ny karazana simoron tsy maintsy ampiasaina mba hahatsapana ny fomba hanintonana lehilahy .
Raha ny marina, ny fitiavana simoron dia fotoana kely ahafahana mandresy. Ary noho io fotoana io dia azonao atao ny manova ny tontolonao sy ny fomba fijerinao ny tontolo iainana ho tsara kokoa, dia afaka manokatra ny tenanao ho sambatra ianao eo amin'ny fiainanao.
Simoron amin'ny fitiavana olona iray manokana
Na dia olona manokana aza ny tanjon'ny fitiavanao, aloha dia mila mianatra ny fomba hitiavana ny fitiavana ao amin'ny sehatrao manokana ianao ary ao amin'ny tontolo anatiny.
Mba hahatonga ny fihetseham-po hitoetra ao aminao, ny dianao isan'andro dia tokony ho tsaramaso (karoty katsaka, tsaramaso amin'ny endrika mangahazo, sns.). Ankoatra izany dia soso-kevitra ny hisotro jiro mitahiry karazana miaraka amin'ny mofomamy isan'andro noho ny vavony tsy misy vidiny. Soraty izany ary ampahatsiahivo fa tanteraka ny nofy, manonona ireo teny-simoron "fitiavana-karaoty". Rehefa afaka kelikely dia hahatsapa ianao fa feno fitiavana ny vatanao, izany fahatsapana mamirapiratra izany. Ireo tsotra, ary amin'ny fotoana mahatsikaiky, simoron - fombafomba ho an'ny fitiavana dia tsy mameno ny fiainanao amin'ny fitiavana, fa manome anao koa fahasalamana sy hatsarana.
Simorona - ny fahatanterahan'ny faniriana sy ny fankasitrahana ny fitiavana
Raha toa ka tsy mifankatia amin'ny olona iray manokana ianao, fa tena te-ho tia, mila miasa ianao amin'ny fikarakarana ilay olona izay tena ilainao. Ohatra, hanao izany ianao, tokony hanangana zavatra toy ny "mitady aho". Soraty ao anatin'izany ireo toetra rehetra tianao ho hita ao amin'ny tapany faharoa, kanefa aza hadino ny maneho ny zavatra azonao omena azy.
Ity dokam-barotra ity dia azo ampiasaina eo akaikin'ny efitranonao, fa amin'ny alàlan'ny lahatsoratra eny an-dalambe ihany. Raha manana herim-po ianao, dia avelao izy ireo hijery ny sambo eny ambony rano, na rehefa manoratra ny nomeraon-telefaoninao, zarao amin'ireo olona tianao any am-piasana.
Ahoana ny fomba hamerenana ny lamosina miaraka amin'ny fanampian'i Simoron?
Ny solontenan'ny lehilahy dia afaka averina amin'ny sakafo, fa tsy salady mahazatra, yoghurts ary sakafo mahasalama. Noho izany, ho an'ny fombafomba, ento miaraka aminao ny fahaizanao ara-kina sy ny teny "vava". Ity farany dia azo atao amin'ny fanontana ny sarafan-tsary, ary ao amin'ny toeram-piraketana izay mametaka ny sarin'ny radio, mametraka ny antenina avy amin'ny clip, sns. Rehefa manao ny fombam-pitenenan'i Simoron, dia mitazà foana ity radio ity, dia mampita ny vaovao.
Manomàna sakafo, mankanesa amin'ny radio ary lazao mafy fa ianao (ny anaranao) dia nanomana toy izany sy toy izany. Noho izany dia mandefa teny tsara ho an'izao tontolo izao ianao, izay azo antoka fa ho sambatra amin'ny fiverenanao eo amin'ny fiainanao.
Ahoana no hanambadiana - Simoron
Mividiana fanasana karatra amin'ny fampakaram-bady ary manasonia izany avy hatrany, amin'ny antsipiriany ny dingana manontolo. Miondrika eo amin'ny fahatsapana fahasambarana tsy manam-petra, eritrereto ny tenanao amin'ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady, mahatsapa fientanam-po.
Afeno ny karatra amin'ny valopy. Rehefa voahidy izany, dia afeno ao anaty boky iray tsara tarehy Anarana iray misy endri-pifaliana azo antoka na ao amin'ny sehatry ny fitiavana, izay mipetraka ao an-tranonao.
Simoron - fombafomba ho an'ny bevohoka
Iray sy fombafomba - manoratra taratasy ho an'ireo vano, izay mamaritra amin'ny antsipiriany ny endriky ny zanakao, ny toetrany, sns. Ary avy eo, toy ny hoe mandefa azy ireo, ohatra, mandoro azy ireo, manipy azy ireo ao anaty tratra, manamboatra fiaramanidina tsy misy fangarony, ary mino fa ho tonga any amin'ilay adiresy ilay taratasy. Fantaro fa tsy ho ela ny valiny.
Aza hadinoina fa, amin'ny fanatanterahana fomban-drazana simoron, mila mino ny fahatanterahana feno ilay drafitra ianao.
Ahoana ny fomba hanamboarana ravina?
"Dibibi Dibebe Kazakazh" - fombafomba iray
Charms ho an'ny Paka
Black magic - fombafomba ho an'ny fahafatesana
Ahoana ny fomba handraisana ny kômonio masina?
Ahoana ny fomba hanaovana ny sira Alakamisy?
Rahoviana no manomboka ny fety Krismasy?
Gallsy aretina - fitsaboana amin'ny fomba fanao
Safidy 24 isaky ny alohan'ny loza
Ny zanakavavin'i Monica Bellucci dia naneho tsy misy lanjany tamin'ny akanjo maranitra
Manicure miaraka amin'ny kamifubuki
Ny mpilalao sarobidy indrindra eto amin'izao tontolo izao dia lehilahy
Inona no anaran'ilay tora-pasika?
Akanjo fohy eo amin'ny balan'ny 2016
Inona no ho hitanao any Petrozavodsk?
Laparoskopy sy ny fitondrana vohoka
Olon-menaka - inona ny fampiasana sy ny fomba fampiasana izany amin'ny cosmetology sy ny fanafody ny volokano?
Fivarotana any Phuket
Fiakanjo fiasa amin'ny vehivavy matavy
Bed amin'ny fampihetseham-batana
Nahoana no mipoaka ny mason'ny saka?